ikhaya labahambi - I-Airbnb
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMarcelo
Isithuba sisemva, indlu ebonakala ngaphambili kukuququzelela indawo yendawo nge-façade. Inegumbi lokulala elahlukileyo, igumbi lokuhlambela kunye negaraji enemfihlo epheleleyo. Indawo elula, kufutshane ne-BR 290 (malunga neemitha ezingama-200) kwindawo yokutshintshana yesibini (Ihotele iSan Isidro). Izibonelelo kunye nefenitshala zintsha kraca. Igumbi linebhedi ephindwe kabini kunye nomatrasi omnye phantsi, kunye nebhedi yesofa ngaphandle kwegumbi, kunye nemifanekiso ebonisiweyo, efikelela kwiindawo ezintlanu.
Malunga ne-42m², iindwendwe zinethuba elilula lokukwazi ukugcina imoto yazo ecaleni kwendlu, kuthathelwa ingqalelo ukuba igaraji ingaphakathi. Ukungena emotweni kusimahla kwaye akuthintelwanga. Ukwahluka kwindawo yam yokuhlala, iindwendwe zinemfihlo epheleleyo. Yenziwa yonke into, yaxhotyiswa kwaye yakhelwa mna nenkosikazi yam, ukuze sithuthuzeleke kwaye kube lula. Akukho nto yenzelwa inzuzo okanye ithuba lokurenta, ke ndifumana yonke into ikhululekile, njengoko bendicinga. Ithuba lokuqeshisa lize njengenzuzo eyongezelelweyo hayi nje ishishini. Andithandabuzi ukuba ixabiso lemali kule ndawo yenye yezona zibalaseleyo edolophini. Ndihlala ndiphucula njengoko kukho izixhobo zokuyenza. Yiza sidibane!!!
Kwi-42 m², iindwendwe zinethuba lokukwazi ukugcina umqeqeshi kufutshane nendlu, nangona igaraji ingaphakathi. Ukungena kumqeqeshi kukhululekile kwaye akukho zithintelo. Ukohlulwa kwindawo yam yokuhlala, iindwendwe zinemfihlo epheleleyo. Yonke into ifakwe ngokupheleleyo kwaye yakhelwe umfazi wam nomfazi wam, ukuze sithuthuzele kwaye kube lula. Akukho nto inokuxhamla kwithuba lokurenta, njengoko ndiyifumana ikhululekile, njengoko bendicinga. Kukho ithuba lokuqesha iwayini njengendlela yokubawa ngakumbi hayi nje ishishini. Andithandabuzi ukuba ubudlelwane beendleko-inzuzo yale ndawo yenye yezona zibalaseleyo kwisixeko. Ndihlala ndigqibezela ukuba kukho izixhobo zokuyenza. ¡¡¡uVenga ukudibana!!!
40" HDTV ene-I-Chromecast, intambo yepremiyamu
Ubumelwane bugqwesile, ubumelwane bayazana, buhlonipha kwaye, ngaphezu kwako konke, bayaluqonda ubizo lwesixeko lokwamkela abahambi ngexesha lehlobo (ikakhulukazi iArgentina). Ubumelwane bomda weBR-290, enyusa ukhangelo lweendawo zokuhlala.
Umbuki zindwendwe ngu- Marcelo
Ifulethi elinegumbi lokulala, igumbi lokuhlambela kunye negaraji enemfihlo. Indawo elula, ekufutshane kakhulu ne-BR 290 (malunga neemitha ezingama-200) kwindawo yokutshintshana yesibini (Ihotele iSan Isidro). Izibonelelo kunye nefenitshala zintsha kraca. Igumbi linebhedi ephindwe kabini kunye nomatrasi omnye phantsi, kunye nebhedi yesofa ngaphandle kwegumbi, kunye nemifanekiso ebonisiweyo, efikelela kwiindawo ezintlanu.
Ifulethi elinegumbi lokulala, igumbi lokuhlambela kunye negaraji enemfihlo. Indawo elula, ekufutshane kakhulu ne-BR 290 (malunga neemitha ezingama-200) kwindawo yokutshintshana yes…